ओली-प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, कस्तो छ एकताको तयारी ? « Naya Page
ओली-प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, कस्तो छ एकताको तयारी ?
प्रकाशित मिति : 13 February, 2018 6:47 pm
काठमाडौं, १ फागुन : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीचको बैठक सकिएको छ । पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन बैठक बसेको थियो ।
ललितपुरको मानभवनस्थित निर्माण व्यवसायी शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा दुई नेताबीच वार्ता भएको हो । अधिकारीको घरमा साँझ ५ : १० मा प्रवेश गरेका ओली र प्रचण्ड ५ बजेर ५० मिनेट जाँदा बाहिरिए । ओली र प्रचण्डविच सोमबार पनि यही घरमा पार्टी एकताको बिषयमा बैठक भएको थियो । सोमबार भएको बैठकमा तत्काल पार्टी एकता गरेर जाने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । मंगलबार पनि त्यही बैठकको निरन्तरता स्वारुप बैठक भएको हो ।
यस्तो तयारी :
स्रोतका अनुसार सोमबार प्रचण्डबीच एकीकृत पार्टीमा दुवै अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष रहने र प्रधानमन्त्री पनि आलोपालो प्रणालीबाट चलाउने समझदारी भएको छ । यही बिषयमा दुई नेताबीच मंगलबार थप छलफल भएको हो । आज उनीहरूबीचको समझदारी बुधबार एकता संयोजन समितिको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षविच ‘प्रारम्भिक सहमति’ जुटेको छ । दुई नेताहरुविच भएको सहमतिको बिषयमा छलफल गर्न बुधबार २ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने र पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर एकता र शक्ति बाँडफाँडवारे टुंगो लगाउने बताएको छ । बुधबारको बैठकले वैचारिक र सांगठनिक कार्यदल निर्माण गरिने बताइएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसहित एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोख्रेल रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता रामबबहादुर थापा बादल रहेका छन् ।
वालकोट स्रोत भन्छ, ‘अब एकता हुन्छ’
वालकोट स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादीविच पार्टी एकता हुने लगभग निश्चित भएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘वैचारिक र सांगठनिक बिषयमा केही मिलाउन बाँकी छ, तर पार्टी एक हुने निश्चित जस्तै छ ।’
यसरी बन्न सक्छ एउटै दल